Forum serasera malagasy Efa tena tsy rariny intsony mihitsy - Dinika forum.serasera.org
Efa tena tsy rariny intsony mihitsy
Fitohizan'ny hafatra : Efa tena tsy rariny intsony mihitsy
rabaradaka - 28/06/2017 08:55
Efa tena tsy rariny intsony mihitsy !
Na dia tsy tehiteny aza ny tena dia mba tsy rariny intsony kosa ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy.
1- Ao amin'ny ministera misahana ny fananan-tany (Domaines) dia tsy tahotra tsy henatra Madame Directeur du Cabinet (ilay nanao afera maizina tao amin'ny Ambatovy) mitaky vola 10 tapitrisa ariary amin'olona raha tianaho vita haingana ny dossiers. Angoniny ao aminy daholo ny dossiers tokony ho soniavin'ny ministre Narson Rafidimanana ary tsy misy sonia mivoaka ao raha tsy mandoa vola, dia misy manao ady varotra mihitsy ao. Aiza no hananan'ny vahoaka vola hatao amin'izany, nefa ny sarany aloha amin'ny Fanjakana ange efa vita daholo e !
2- Ao amin'ny Fitsarana indray dia mody mihetsiketsika ny SMM hanaronana ny bizna sy afera maloto ataon-dry zareo Magistrat. Aiza ve ka misy dossiers efa hatramin'ny 2000 no tao dia akana vola foana ny olona mikarakara azy. Tena tsy rariny e !
3- Amidy ny poste budgetaire any amin'ny Ministera rehetra ary io moa no nampanan-karena ny firondrana Tetezamita satria maherin'ny 250.000 mpiasa no tafiditra nandritra ny Tetezamita ka hatramin'izao, ireo anefa nandoa vola 5 tapitrisa ariary avy.
Sy ireo maro tsy voatanisa.
Manainga ny vahoaka malagasy mba ho tonga saina amin'izay fa tsy andrasana ho efa rendrika sy potika ny firenena vao ho tonga saina. Mifohaza ary andao handrava ny ratsy sy ny asan'ny maizina eto amin'ny firenena.